မေစစ်ပိုင်| January 23, 2013 | Hits:3,074
| | “ပိုသေးလား၊ လိုသေးလား၊ ပိုရင်ဝယ်တယ်၊ လိုရင်ရောင်းပေးမယ်” ဆိုတဲ့ လက်မှတ်မှောင်ခို ရောင်းချနေတဲ့ အသံတွေနဲ့ ဆူညံ နေတာကတော့ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က ရန်ကုန် မင်းဓမ္မလမ်းပေါ်က Myanmar Convention Center (MCC) ခန်းမ ကွင်းပြင်မှာ ကျင်းပတဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်ရဲ့ တကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲမစခင် အဝင်ဝမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Linyone January 23, 2013 - 9:20 am	Congratulations! Ko Jimmy is the father of modern stereo music of Burma. Nobody can deny that. He isasenior citizen now but his talent and his love of music still remain young and energetic. I drove down to Houston recently but Ko Jimmy was nowhere to be found. I later found out that he was traveling to Burma. I feel great and happy as he is now visiting where he created modern music to the Burmese citizens. God bless you, Ko Jimmy.
Reply	Ko Latt January 25, 2013 - 9:08 pm	- နောက်တော့ တီးလုံးသံတွေ စတင်ပြီး တိုက်ပုံနဲ့ ပုဆိုး ဝတ်ဆင် ထွက်လာတဲ့ လားရှိုးသိန်းအောင်က “ခုတ်မောင်းလာတဲ့ ရထားတစင်း” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ပရိသတ် တွေကို စတင် ဖျော်ဖြေပါတော့တယ် – သီချင်းအမည်မှားနေပါတယ်။ အမှန်က ” မင်းတို့ အကြောင်းမဟုတ်ဖူး ” ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာစေချင်ပါတယ်။ ရမ်းမတုတ်သင့်ပါ။